“सबै अधिकार गाउँघरबाटै पाइने भएकाले त्यत्तिकै क्षमतावान् हुनुपर्छ” | newdnn.com
७,बुधबार ०९:११ Sangita Rai
‘धन्न बाँचे ’ नेपालगन्ज कोहलपुर सडकखण्डमा चार वर्षअघि भएको त्यो कहालीलाग्दो घटना सम्झदैँ उनले भनिन्– ‘पत्रकारिता त्यतिकै जोखिम पनि हो । समाज रूपान्तरणको लागि गतिलो हतियार पनि ।’ दोस्रो चरणको निर्वाचनका बेला आन्दोलन चर्किएको थियो । रिर्पोटिङका लागि गएकी उनलाई आन्दोलनकारीले आक्रमण गरे । सख्त घाइते उनको नेपालगन्जमा प्रारम्भिक उपचारपछि लामो समय काठमाडौंमा भएको उपचारपछि निको भइन् । मलाई पुनःजन्म मिल्यो ।
मलाई समाजसेवा नै गर्न भनेर भगवानले बचाए उनी भन्छिन्–‘पत्रकारिताबाट होइन अव राजनीतिबाट ।’ बाँकेको राधापुरमा जन्मिएकी दीपा आले मगर बाँकेबासीका लागि अपरिचित नाम होइन । नेपालगन्जमा करिव एक दशक क्रियाशील पत्रकारिता गरेकी उनले यहाँको हरेक विषयलाई राम्रो ढंगले बुझेकी छिन । विद्यार्थी राजनीति र पत्रकारितासँग सँगै सुरु गरेकी उनले नेपालगन्ज महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्जमा नेविसंघको कोषाध्यक्ष, मगर विद्यार्थी संघको केन्द्रीय अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेकी छिन ।
त्यस्तै नेपाल प्रेस युनियनको सचिव समेत रहेकी उनले विभिन्न पेशागत संघ–संगठनमा आवद्ध भएर समाजसेवामा ठूलो योगदान गरेकी छन । ‘यसलाई विश्वास मानेर मलाई काँग्रेसले खजुरा गाउँपालिकाको उपप्रमुख उम्मेदवारको टिकट दिएको छ’ उनले भनिन् । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिसकेकी उनले अहिले कानुनमा एलएलबी गर्दैछिन ।
संवैधानिक व्यवस्थानुसार स्थानीय तहमा प्रमुख पदमा महिला अनिवार्य गरेपछि महिला सहभागिता बढ्नेछ, उनले भनिन्–‘उपप्रमुखको जिम्मेवारी पनि ठूलो हुने भएकाले पढेलेखेको महिला नै त्यसको लागि कामयावी हुन्छन् । म त्यसमा फिट भएरै अघि बढे ।’ खजुरा गाउँपालिकालाई सूचनामा देशकै नमूना गाउँपालिका बनाउने योजनाका साथ घरदैलोमा व्यस्त आले भन्छिन्– ‘खजुरालाई फ्रि वाइफाइ जोनका रुपमा विकास गरिनेछ ।’ आलेसँग हामीले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
कस्तो चल्दै छ चुनावी अभियान ?
तीब्ररुपमा चलिरहेको छ । हिजोआज मतदाताकै घर–आँगनमा व्यस्त छु । बिहानदेखि रातीसम्मै मतदाताहरुलाई भेट्ने उहाँहरुको चाहना बुझ्ने र आफ्ना एजेण्डाहरु सुनाउने काम चलिरहेको छ । कतिपय मतदातालाई मतदान कसरी गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन । आफ्नो प्रचारसँगै मतदाता शिक्षा पनि आफूले दिदैं चुनावी प्रचार प्रसारमा लागिरहेकी छु ।
मतदाता के चाहान्छन् ?
जनता भोट हाल्न आतुर छन् । २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आप्mना जनप्रतिनिधि छान्नका लागि उनीहरु हतार गरिरहेका छन । सिंहदरवारको अधिकार आप्mनो गाउँटोलबाट सहजै पाइने भएपछि मतदाताहरुमा चुनावी इच्छा व्यग्र देखिन्छ । प्रायः सबै मतदाताहरुको चाहना त्यति छ, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत आवश्यकताहरुको पूर्ति सहज रुपमा होस् भन्ने छ ।
भोट हाल्न मात्र मतदाता आतुर छन त ?
भोट हाल्न मात्र हैन अब विकास निर्माणको मूल फुट्ने अपेक्षामा पनि जनता रहेका छन् । किनभने संवैधानिक व्यवस्थानुसार स्थानीय तहलाई अधिकारमुखी गराइएको छ । यसले स्थानीय विकासलाई प्रभावकारी गराउने भएकाले मतदाताहरु छिटो जनप्रतिनिधि चुनेर आप्mनो टोल, छरछिमेकको विकास हेर्न चाहिरहेकाछन् ।
के छन् तपाईका चुनावी एजेण्डाहरु ?
मसँग त्यस्तो पृथक केही पनि छैन । हामीले अधिकांश जनताको चाहना, मागका आधारमा काम गर्ने हो । त्यसैले मैले यो नै गर्छु भन्नेभन्दा पनि स्थानीय समस्याको पहिचान गर्दै त्यसको सम्बोधनको खोजी गर्नु ठूलो कुरा हो जस्तो लाग्छ । तर यति भन्दैमा एजेण्डानै नभएको पक्कै होइन । नेपाली काँग्रेसले आप्mनो छुट्टै घोषणापत्र जारी गरिसकेको छ । तर हामीले खजुरा गाउँपालिकाको वस्तुस्थिति केलाएर यहाँको सम्भावना, समस्या सबै कुरालाई समेटेर एजेण्डा तयार पारेका छौं । जिल्लाको प्रमुख सहरका रुपमा परिचित खजुरा भएपनि यस क्षेत्रमा सञ्चार गृहहरु छैनन् । म आफै पनि पत्रकारिताबाट आएकाले सबैभन्दा पहिले जनताले सुसुचित हुन पाउने अधिकारका लागि पहल हुनेछ । सूचना र सञ्चारबिना नागरिकले सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाहरु नपाइरहेको स्थिति छ । जवसम्म हामीले प्रविधिको विकास गर्न सक्दैनौ तवसम्म कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । त्यसै खजुरा गाउँपालिकालाई फ्रि वाइफाइ जोनका रुपमा विकास गरिने छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा नपाइरहेको अवस्था छ । यस्ता यावत् समस्या र वस्तुस्थितिलाई हामीले आफ्ना एजेण्डा समेटेका छौं ।
समृद्ध खजुरा बनाउन तपाइँका योजना के छन्
खजुरा गाउँपालिका बहुजाति, बहुभाषी भएको क्षेत्र हो । यहाँ हिन्दु, मुस्लिम, मधेशी, जनजातिलगायतको बसोबास छ । यस क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । यहाँका ऐतिहासिक कला–संस्कृतिको संरक्षण, सम्र्वद्धन तथा प्रबर्धन गर्न सकियो भने आन्तरिक पर्यटनको सम्भावित स्थल बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । खजुरा गाउँपालिका भोलि पक्कै नगरपालिका बन्छ । नगरपालिकाकै आधार बनाएर हामीले योजनाहरु बनाएका छौं ।
त्यसलाई सार्थक पार्ने खाका के छन् ?
वस्तुनिष्ठ ढंगले तयार पारिएको योजनामा जनतासँग प्रत्यक्ष सहभागितालाई जोड दिँदै समृद्ध खजुरा बनाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । हामीले योजनालाई सही ढंगले पहिचान गरी जनताको बृहत सहभागिताबाट नै हाम्रा योजना र खाकालाई साकार पार्ने लक्ष्य लिएका छौं । किनभने जव हाम्रा एजेण्डामा जनता सहमत हुनुभयो र जिताउनुभयो भने उहाँहरुकै सहकार्यमा अघि बढ्ने हो ।
खजुरा गाउँपालिकाको मुख्य समस्या के हो ?
सदरमुकाम नेपालगन्जसँगै जोडिएको गाउँपालिका भएपनि यहाँ गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत समस्याहरु छन् । मधेशी समुदाय शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । सञ्चारको खासै विकास हुन सकेको छैन । १२ किलोमिटरमा रहेको सदरमुकाममा दर्जनौ रेडियो, पत्रपत्रिका छन् तर यहाँ एउटा पनि छैनन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने नगरउन्मुख गाउँपालिका सञ्चारको पहुँचमा छैन । अर्को कुरा कृषिको ठूलो सम्भावना छ तर सिंचाइँको अभाव छ । यिनै समस्याभित्र सम्भावना खोज्ने हो ।
पत्रकारिता छोडेर किन राजनीतिमा
तपाईले सही कुरा गर्नुभयो । पत्रकारितामा जत्तिकै सम्मान राजनीतिमा छैन । राजनीति धेरैले फोहोरी खेल भनेर आलोचना गर्छन । फोहोरी खेल भनेर हामी चुप लागेर बस्यौं भने यो जहिल्यै पनि फोहोरी फोहोरी भइरहन्छ । तपाई हामी जस्तो पढेलेखेको र बुझेको मान्छे राजनीतिमा आउन जरुरी छ । र, फोहोरी गराइएको राजनीतिलाई शुद्ध पार्न आवश्यक छ । फेरि तपाईले सोध्नुहोला कसरी रु यो एक्लै सम्भव छदैँ छैन । त्यसका लागि राजनीति बुझेका मैले फेरि पनि भन्दैछु तपाई हामी जस्ता युवाहरु अगाडि आउन जरुरी छ । इमान्दारिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता यी कुराहरुलाई पलपल सम्झेर अघि बढ्न सकियो भने राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि पत्रकारिताबाट मात्रै पुग्दैनथ्यो । सबैको नीति राजनीति हो । त्यसैले नीतिगत बहस चलाउनै जरुरी छ ।
खजुरा गाउँपालिकाबासीले तपाईलाई किन जिताउने ?
म पढेलेखेको सक्षम युवा हुँ । काँग्रेसका विभिन्न भातृ तथा शुभेच्छुक संघ–संगठनको नेतृत्व सहज ढंगबाट बहन गरिसकेको सफल युवा हुँ । ग्रामीण क्षेत्रमा जन्मिएर समाजसेवाको लागि संघर्ष गर्दै गरेकी एक युवा पनि हुँ । पत्रकारितामा हुँदा पनि आफनो पेशामा ज्यानको बाजी लगााएर काम गरेको तपाईलाई थाहा छ । म जुन जिम्मेवारी लिदैँछु इमान्दार भएर अहोरात्र खटिएर पूरा गर्नेछु । म हरेकको घरदैलोमा पुगेर उनीहरुको सुख दुखको सारथी बनेर काम गर्नेछु । विपन्न समुदायका महिलाहरुको आर्थिक आयआर्जनका लागि मेरो हदैसम्मको पहल हुने छ । यहाँको पूर्वाधार विकास, सडक, पुलपुलेसा, विद्यालय, कृषि क्याम्पस निर्माणका लागि मेरो अहम् भूमिका हुनेछ ।
अन्तमा तपाइ लाइ केही भन्नु छ की ?
अन्तमा मेरो आग्रह छ । खजुरा गाउँपालिकामा करिव ३० हजार मतदाता छन् । आज होइन भोलि हेर्नुस् कसैको बहकाउमा लागेर आप्mनो मत खेर नफाल्नुहोस् । यो स्थानीय तहको चुनाव हो । सिंहदरवारको अधिकार गाउँघरबाटै पाइने भएकाले यहाँ आउने जनप्रतिनिधि पनि त्यत्तिकै क्षमतावान् हुनुपर्छ ।